synonym of self – Chuu Wai Nyein
Homesolo exhibitionssynonym of self
Chuu Wai Nyein is interested in discovering and working with handcrafted materials, as can be seen in this exhibition which showcases artwork made in part with traditional htameins and longyis fabrics as canvases. Though it can be time consuming and labour intensive, the results are aesthetically satisfying. In selecting the cotton, the artist considered the pattern, the thickness, the weight, and the tightness of the thread. The final step in selection is texture; running her hands over the surface, choosing fabric not only for look, but for feel. Five layers ofabase coat are applied to the material and then the image is painted on. If you look carefully, the movement and the texture of the brushstrokes are different with each canvas, light brush movements combine with the cotton texture to bring to life the vision of the artist.
61 x 61 cm (24×24 inches)
Women have always been born with the potential to be strong minded and yet as they grow up within society, they forget this power as they are pushed and pulled by social currents. Women’s ways of thinking and their behaviour become subject to monitoring. Their thoughts and their clothes, the shape of their bodies are scrutinised by society. Women are trapped and put on display, locked withinaglass case inashop window, underaspotlight. The daily lives of women in Myanmar are disrupted and colonised. They are bullied and patronised. How many pairs of eyes look down on them? Looking down on their dress, looking down on them going out and looking down on them coming in, looking down on their loves and lovemaking, looking down and stepping on their very existence.
Here, the ladies emerge from this state with the brilliant glow of newly born stars. They emerge from the depths of the heart, from the neurons, from the meat, the bone and the blood. Reacting to the same catalyst, but expressing themselves in waves of diversity. Synonym of the self.
These synonyms are strong and full of confidence, bravery, self-respect, beauty, intelligence, and passion. They stand firm as trees, unbreakable in the face of the society’s foul winds. They tease and smirk at injustice. Full of freedom, the synonyms, the ladies, are making their own clear and safe future.
But other synonyms remain locked and limited. They are satisfied in the glass box. Some have forgotten their existence. Some don’t want to remember.
To see the ganouq, the flowery but taut arabesques, stretched over faces; the memory and existence of suffocation. But now is the time to breathe.
အမျိုးသမီးတွေရဲ့ စိတ်ဝိဉာဉ်အတွင်းမှာ မှုလကတည်းက ရပ်တည် ကိန်းအောင်နေတဲ့ ခိုင်မာသော စိတ်စွမ်းအား / ဒါတွေဟာ ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ ရိုက်ခတ်ပုံဖော်မှု လွှမ်းမိုးခံရမှုတွေ အတွင်းမှာ ပုံစံပြောင်းလာရပြီ/ ယဉ်ကျေးမှုလို့ တဦးတယောက်က ပြောလာရင် အမျိုးသမီးတွေကိုပဲ ပြေးမြင်ကြတယ်/ အမျိုးသမီးထု အပေါ်မှာ ခွဲခြမ်းဝေဖန်ပြီး အဓိကထား သတ်မှတ်ကြတယ်၊ ခေတ်တွေ ဖြစ်လာတယ်/ စနစ်တွေ ဖြစ်လာတယ်/ အမျိုးသမီးတွေရဲ့ အဝတ်အစား/ အပြောအဆို၊ အနေအထိုင်၊ အတွေးအခေါ် တွေကို မျက်စိ ဒေါက်ထောက် ပိုင်းခြားစိတ်ဖြာကြတယ်/ ယဉ်ကျေးမှု ဆိုတဲ့ စံနမှုနာ တခုအတွက် အမျိုးသမီးထုတွေကို ဖန်ဘောင်ထဲမှာ လိုတိုင်းကျ ပုံသွင်း/ မြေဝယ်မကျ နားထောင် ပိတ်လှောင်ထားချင် ပုံရတယ်/ တချိန်တည်းမှာပဲ ဘောင်ကန့်သတ်မှုစည်းမျဉ်းတွေ ရေးဆွဲကြတယ်/ ခန္ဓာကိုယ် တည်ဆောက်ပုံ ကွဲပြားမှုနဲ့ အားနွဲ့စေချင်ကြတယ်၊ အုပ်စုခွဲ ချင်ကြတယ်၊ နှိမ့်ချစေချင်ကြတယ်/ မြန်မာ အမျိုးသမီးတွေ နေ့စဉ် ရှင်သန်ရုန်းကန်နေရတဲ့ ဘဝမှာ ကျူးကျော်မှုတွေ/ နှောက်ယှက် ကျော်ဖြတ်မှုတွေ၊ အနိုင်လိုမှုတွေ၊ အင်အားကြီးကြောင်း ကြွားဝါးလိုမှုတွေ ပြည့်နှက်လာရတယ်/ အောက်ကို ငု့ံကြည့်ကြတဲ့ မျက်လုံး အရေအတွက် ထုထည် ဘယ်လောက်များ ထူထပ်များပြားလိုက်သလဲ/ အဝတ်အစားနေရာ အတွက် ငုံ့ကြည့်ကြတယ်/ သွားလာမှုတွေ အတွက် ငုံ့ကြည့်ကြတယ်/ နုလုံးသားရေးရာအတွက် ငုံ့ကြည့်ကြတယ်/ ချစ်မှု ရေးရာအတွက် ငုံ့ကြည့်ကြတယ်/ ရပ်တည်မှုတွေ အတွက် ငုံ့ကြည့်ကြတယ်/ တုန့်ပြန်မှုတွေ အတွက် ငုံ့ကြည့်ကြတယ်/ နောက်ပြီး အမျိုးသမီးတွေကို အမျိုးသမီးတွေ ဖြစ်နေလို့ တက်နင်းသွားကြပြန်တယ်/
ဒီအခြေအနေတွေမှာ ဖြာထွက်လာတဲ့ အလင်းတန်းတွေလိုပဲ အမျိုးသမီးလေးတွေ ပေါ်ပေါက်လာရတယ်။ နှလုံးသားထဲက ထွက်လာတယ်၊ ဦးနှောက် မှတ်ဉာဏ် အကန့်တွေထဲ က ထွက်လာတယ်၊ အသားထဲက ထွက်လာတယ်၊ အရိုးထဲက ထွက်လာတယ်၊ သွေးစက်တွေက ထွက်လာတယ်။ ထွက်ပေါ်လာရတဲ့ အကြောင်းတွေ တူညီတယ်—- ဒါပေမယ့် ထွက်ပေါ်လာရတဲ့ ရုပ်လွှာပုံရိပ်က ကွဲပြားသွားတယ်။ ရုပ်ကွဲတွေ အားလုံးရဲ့ တူညီမှု၊ ညီမျှမှုက ဒီဖန်ဆင်းရှင်ရဲ့ အမျိုးသမီးလေးတွေအားလုံး နက်ရှိုင်းစွာ စိမ့်ဝင်နေကြတဲ့ ဖြစ်တည်မှုတွေပဲ။ ရုပ်ကွဲတွေ အားလုံး ခိုင်မာကြတယ်၊ ရဲဝင့်ပြတ်သားကြတယ်၊ မိမိကိုယ့်ကိုယ် ချစ်ခင်အလေးထားကြတယ်၊ လှပမှုတွေကို အသိဉာဏ်နဲ့ ပေါင်းထားကြတယ်၊ ပြင်းပြမှုတွေ ရှိတယ်၊ လွှမ်းမိုးမှုတွေမှာ မယိမ်းယိုင်အောင် အင်အားပြည့်ဝတယ်၊ ယုံကြည့်မှု ပြည့်ဝနေတယ်၊ သတ္တိအပြည့် ရှိတယ်၊ မတရားမှုတိုင်းအတွက် ပမာမခန့် တုန့်ပြန်နိုင်တယ်၊ လှောင်ပြုံး ပြုံးတတ်တယ်၊ လွတ်လပ်မှု အပြည့်ရှိတယ်။ ဒီလို ရုပ်ကွဲအမျိုးသမီးတွေ အတွက် ကြည်လင် စိတ်ရှင်းတဲ့ လိပ်ပြာလုံမှုတွေက ကို်ယ်ပိုင် အနာဂတ်အတွက် စောင့်ကြိုနေတယ်။
တပြိုင်နက်ထဲမှာပဲ အယူလွဲ ရိုးရာတချို့ရဲ့ ပိတ်လှောင်မှုတွေ ကြားမှာ ဘောင်ခတ်မှုကို ကျေနပ်နေကြတဲ့ ရုပ်ကွဲတွေ— မေ့လျှော့နေတဲ့၊ ရှိလို့ ရှိမှန်းတောင် မမှတ်မိနိုင်တော့တဲ့၊ ရှိနေမှန်း မသိချင်တော့တဲ့ အမျိုးသမီးထုတွေ အသက်ရှုမဝအောင် မွန်းကြပ်ပိတ်လှောင်နေခြင်းက လန့်နို်းလာစေဖို့ ကနုတ်ဖုံးထားတဲ့ ရုပ်ကွဲတွေ ပေါ်ထွက်လာရတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ အညံ့ခံ အောက်ကျို့မှုတွေ၊ ဦးနှောက်ကို အသေသတ်မှုတွေ ရေစီးကြောင်းအတိုင်း စီးမြောရင်း ပေါ်ထွက်လာတဲ့အခါ၊ လွှမ်းမိုးခံရမှုမှာ မိန့်မောသွားတတ်တဲ့အခါ ဒီအသက်ရှု ကြပ်မှုကို မမေ့ပဲ ပြန်ခံစားရင် ကိုယ်တိုင်ရဲ့ ပုံဖော်ဖြစ်တည်မှု မပျောက်ကွယ်အောင် ကြောင်းတူရုပ်ကွဲများက မှတ်ဉာဏ်တခု ရေးစိုက်ခဲ့ရပါတယ်။